लाहुरे डाक्टर- फिचर - कान्तिपुर समाचार
आश्विन २०, २०७४ गणेश राई
काठमाडौं — नेपाली जनमानसमा लाहुरे भनेका अनपढ हुन्छन् भन्ने धारणा छ । तर त्यो धारणाले कोल्टे फेरेको धेरै भइसकेको छ, चर्चा भने काम हुन्छ । नेपालको राजनीतिक आन्दोलनहरूमा सक्रिय भूमिका निभाएकाहरू लाहुर गए ।
अर्काको देशमा भाडाको सिपाही बन्न हुन्न भन्दै विरोध गर्ने ठिटाहरू पनि अन्तत: लाहुरे बने । सैनिक जीवनमा माथिल्लो दर्जा हासिल गरेनन् । तर मनभित्र पढ्ने धोको पालेकाहरू पनि थिए केही । तिनले उच्च शिक्षासँगै विद्यावारिधि (पीएचडी) उपाधिसमेत हासिल गरेका छन् । उनीहरूको नाम अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिजलगायतका युनिभर्सिटीको अनुसन्धाता सूचीमा दर्ज भएको छ । विषयविज्ञका रूपमा बेलायतमै कार्यरत पनि छन् केही । ब्रिटिस गोर्खा सैनिकमा कार्यरतर सैनिक पेसालाई बीचैमा छाडेर शिक्षालाई अघि बढाउनेहरूसमेत बढेका छन् ।
डा. प्रेम आले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धविज्ञका रूपमा चिनिन्छन् । उनले भर्खरै मात्र (सन् २०१७) मा अक्सफोर्ड ब्रुक्स युनिभर्सिटीबाट विद्यावारिधि उपाधि धारण गरेका छन् । ‘नेपालको सार्वभौमसत्तालाई ठूला मुलुकले पारेको असर’ शीर्षकमा शोध गरेका हुन् । उनी त्यही विश्वविद्यालयको एसिस्टेन्ट रिसर्चर छन् । उनी बेलायतकै डिफेनस कलेज अफ कम्युनिकेसन सिस्टममा सहप्राध्यापक छन् । सन् १९८६ मा भर्ती भएर २०१६ मा अवकाश लिए । यसबीचमा उनले युनिभर्सिटी अफ लन्डनबाट ‘राजनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध’ विषयमा बीएस्सी अनर्स गरेका थिए । त्यस्तै, बेलायतकै क्रानफिल्ड युनिभर्सिटीबाट ‘अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा’ विषयमा एमएस्सी गरेका थिए । उनी एनआरएन यूकेका उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । पेसाले उनी ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका अवकाशप्राप्त मेजर हुन् । उनको स्कुले जीवन स्याङ्जाको जनज्योति माविबाट आरम्भ भएको हो । बसोबास चितवनमा रहेको छ । पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराबाट आईएस्सी उत्तीर्ण गरेपछि इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरको सपना बुन्दै गर्दा भर्ती हुन पुगे । ‘बुवाको करले भर्ती हुनुपर्‍यो,’ सामाजिक सेवामा लागिपरेका उनी भन्छन्, ‘ज्यान युकेमा छ, दिल नेपालमै छ । नेपालका गरिब र असहायका निम्ति केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ ।’ उनी चिल्ड्रेन फर चिल्ड्रेन नेपाल नामक संस्थाका ट्रस्टी हुन् । उक्त संस्थामार्फत धादिङ र पोखरामा काम गर्दै आएको उनले सुनाए ।
नेपालको शिक्षाका विज्ञ
लाहुरे चन्द्र लक्सम्बा अहिले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका एक अनुसन्धाताको परिचय बोकेका छन् । उनी बेलायतवासी नेपालीमाझ डा. चन्द्र लक्सम्बाका रूपमा परिचित छन् । सन् २००५ मा युनिभर्सिटी अफ सर्रेबाट ‘नेपालको शिक्षा प्रणाली तथा जीवनपर्यन्त सिकाइ’ विषयमा विद्यावारिधि हासिल गरेपछि दायर फाँटिलो बनेको हो । ‘नेपालमा आरक्षण होइन, हरेक समाजलाई सक्षम तुल्याउन तलबाटै जग बसाएर प्रतिस्पर्धा गराउन जरुरी छ,’ उनी भन्छन् ।
लक्सम्बा अक्सफोर्डमै ‘भोकेसनल लर्निङ एक्सपर्ट’ का रूपमा कार्यरत छन् । उनी सेन्टर फर नेपाल स्टडिज यूकेका कार्यकारी निर्देशक हुन् । त्यसै संस्थामार्फत अनुसन्धान कार्य जारी राखेका छन् । बेलायतमा बसोबास गर्ने नेपालीको जनगणना गरेका छन् । सन् २००७ देखि २००९ मा गरिएको जनगणनाले ७२ हजार १ सय ७३ नेपाली रहेको देखाएको छ । जसमध्ये ६८.५ प्रतिशत ब्रिटिस गोर्खा परिवार छन् । उनले आधारभूत मानव अधिकार, स्वाभिमानपूर्वक बाँच्ने आधार (धर्म, कर्म, रीतिथिति) जस्ता विषय केलाएको जनाए । यो तथ्यांकले बेलायतका नीतिमा प्रभाव पारेको लक्सम्बाको दाबी छ । सन् २०११ मा गरिएको अनौपचारिक जनगणनाले बेलायतमा १ लाख ५ हजार नेपाली रहेको प्रक्षेपण गरिएको छ । यसैगरी, डा. लक्सम्बा ब्रिटिस गोर्खाहरूको इतिवृत्तिबारे समेत जानकार हुन् । उनले ‘नेपाली डायस्पोरा र सामाजिक परिचालन, गोर्खाहरूको समानता मुद्दाको मावनशास्त्र’ विषयमा अनुसन्धान गरेका छन् ।
सोलुखुम्बु सल्यानका मुलीवीर राई यतिखेर बेलायतको किङस्टन युनिभर्सिटीमा विद्यावारिधिको अन्तिम शोधमा व्यस्त छन् । उनको रुचि हो– फिल्म । शोधको शीर्षक ‘दि वे अफ गोर्खाज् थ्रु फिल्म स्टडिज’ रहेको छ ।
बीएड दोस्रो वर्षमा पढ्दै गर्दा सन् १९९३ मा भर्ती लागे । पल्टनघर छिरेपछि पढ्ने धोको साँचेरै अघि बढिरहेका छन् । अहिलेसम्म पल्टनमै छन् । उनको खाँटी परिचय भने ब्रिटिस लाहुरे नै हो । यदि लाहुरे नभइदिएको भए सायदै विद्यावारिधि उपाधि पहिल्याउने थिए । नयाँ विषयमा केही गर्ने सोचाइले फिल्म रोजेको उनी सुनाउँछन् । जसले गर्दा ब्याचलर्स र मास्टर्स दुवै तहको पढाइ फिल्म केन्द्रित गरे ।
उनको शब्दमा सिनेमा भनेको सामाजिक घटना, परिघटनालाई प्रोजेक्सन गरेर डिजिटल र एनालग गरी प्रस्तुत गरिने विधि हो । यो ऐतिहासिक पनि हुन्छ । विगत, वर्तमान र भविष्यको कल्पना प्रक्षेपण गरिन्छ । यो विज्ञान पनि हो । ‘फिल्म सबैभन्दा सशक्त माध्यम हो, पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धबारे धेरै फिल्म बनेका छन्,’ उनले भने, ‘तर विश्व थर्काउने ब्रिटिस गोर्खा सैनिकबारेमा विदेशीले खासै फिल्म बनाएका छैनन् । केही डकुमेन्ट्री बनेका छन् ।’ छ वर्षअघि नेपालमै केसाङ छेतेनको निर्देशनमा ‘हु वान्टस् टु बी अ गोर्खा’ पनि पहिलो फिल्म भएको उनी जनाउँछन् । त्यसअघि तुलसी घिमिरेले निर्माण गरेको ‘लाहुरे’ चलचित्रले केही हदमा समेटिएको उनको ठम्याइ छ । बीबीसीले गोर्खालीलाई समेटेर केही डकुमेन्ट्री बनाएको छ । मुलीवीर राई आफ्नो शोधले नेपालको फिल्मी क्षेत्रको दायरालाई फराकिलो पार्न सघाउ पुर्‍याउने दाबी गर्छन् । उनी नेपाली साहित्यका आख्यानकार पनि हुन् । उनका ‘बिसाइत’, ‘छाल’, ‘हरियो पर्खाल’ र मृत सहर’ गरी चार उपन्यास कृति प्रकाशित छन् ।
विजय हितान मगर निवृत्त ब्रिटिस गोर्खा हुन् । नेपालमा आईएस्सीसम्मको अध्ययनपछि बेलायत भर्ती लागेका थिए । ओपन युनिभर्सिटी अफ हङकङबाट बीएस्सी गरे । त्यसपछि हितानले लन्डनको युनिभर्सिटी अफ ग्रिनविचबाट एमएस्सी गरेपछि थप बाटो खोलेका हुन् । अहिले बेलायत सरकार मातहतको वातावरण निकायमा वातावरणविज्ञका रूपमा कार्यरत छन् । सन् २००८ मा शोधकार्य गरेलगत्तै यो अवसर पाएका हुन् ।
नेपालको सन्दर्भमा उनको योजना छ । ‘नेपालको वातावरणीय विकासमा केही काम गर्ने सोच बनाएको छु,’ नेपाल र बेलायतबीचको दुई सय वर्षदेखिको सम्बन्ध निरन्तर रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सहर बजारको फोहोरमैला कसरी व्यवस्थापन गर्ने र आर्थिक उन्नतिसँग जोड्ने भन्ने खाका बनाएको छु ।’ त्यसनिम्ति बेलायतस्थित दूतावास, गैरआवासीय नेपाली संघ र नेपाल सरकारको संयुक्त सहकार्य रहन सक्ने उनले जनाए ।
उनी साहित्यकार पनि हुन् । उनको ‘बिछोडअघिको रात’ र ‘बाग्मती ब्लुज’ कविता संग्रह, ‘थकित पृथ्वी’ कथा संग्रह र ‘इको उत्सर्जन’ निबन्ध संग्रह प्रकाशित छन् । वातावरण साहित्य तथा संरक्षण उनको रुचि हो ।
प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ ०८:५३
आश्विन २०, २०७४ लालप्रसाद शर्मा
पोखरा — व्यवस्थापन दरिलो र गुणस्तरमा सुधार भएसँगै यहाँको नदीपुरस्थित बालमन्दिर मावि अब्बल बन्दै गएको छ । प्रधानाध्यापक, शिक्षक, व्यवस्थापन समिति र अभिभावकबीचको सुमधुर सम्बन्धले विद्यालयले शैक्षिक फड्को मार्न सफल भएको हो ।
२०६२ मा पहिलो पटक एसएलसीमा सहभागी विद्यालयले लगातार राम्रो नतिजा हासिल गरिरहेको छ । २०७२ र २०७३ मा शतप्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भए । शैक्षिक एवं अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापका कारण दस पटकसम्म कास्कीको उत्कृष्ट स्कुल बन्न सफल भएको छ । यस वर्ष पनि चार नम्बर प्रदेशको उत्कृष्ट विद्यालयमा यो परेको छ । यसअघि २०७० मा पश्चिमाञ्चलमै उत्कृष्ट बनेको थियो ।
‘शैक्षिक गुणस्तरका लागि टिम वर्क महत्त्वपूर्ण रहेछ,’ प्रधानाध्यापक सुशील बस्नेतले भने, ‘काम गर्ने इच्छाशक्ति साथै सरोकारवालाबीच सुमधुर सम्बन्ध र समन्वय पनि उत्तिकै आवश्यक पर्ने रहेछ ।’
यति बेला अभिभावक र विद्यार्थीमा अंग्रेजी मोह ह्वात्तै बढेको छ । सबै कक्षामा अंग्रेजी माध्ययमबाट पढाउँदै आएको छ । त्यसैले विद्यार्थी ओइरिइरहेका छन् । १० कक्षासम्म १ एक हजार ७८ विद्यार्थी छन् । उनीहरूलाई २६ सेक्सन बनाएर पढाइन्छ । कक्षा ११ र १२ मा व्यवस्थापन र शिक्षा विषयमा थप २ सय ७३ विद्यार्थी छन् । ४५ शिक्षक र ११ कर्मचारी छन् ।
‘मल्टिमिडियाको प्रयोगलाई जोड गरेका छौं,’ प्रअ बस्नेतले भने, ‘यसलले शैक्षिक गुणस्तरमा सहयोग पुर्‍याउने रहेछ ।’ विद्यार्थीबाट लेखरचना तथा कला प्रदर्शनका लागि बाल बगंैचा भित्तेपत्रिकाको व्यवस्थापन, वार्षिक कार्यक्रमसहितको शैक्षिक क्यालेन्डर प्रकाशन, पढाइसँगै अतिरिक्ति गतिविधि, शैक्षिक भ्रमण, खेलकुद, चित्रकला, नृत्य र संगीतका कक्षा पनि सञ्चालित छन् । अतिरिक्त क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न समिति उपसमित गठन गरिएका छन् । शैक्षिक गतिविधि निरीक्षणका लागि १५ वटा सीसी क्यामेरा जडान गरिएका छन् ।
‘समितिले कमीकमजोरी भएमा सच्चाउने र स्रोत जुटाउने काम गर्दै आएको छ,’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष देवेन्द्रकिशोर बाँस्तोलाले भने, ‘मुख्य कुरा भनेकै शिक्षक र विद्यार्थीको मिहिनेत हो । अभिभावकले पनि नियमित रूपमा विद्यालयको रेखदेख गर्ने भएकाले विद्यार्थीहरू ट्रयाकबाहिर जान पाउँदैनन् ।’
नेपाल बाल संगठन स्थापनापछि शिशु कक्षाको रूपमा रत्न नमुना पाठशालाका नाममा २०२४ मा स्थापना भएको विद्यालयले वेबसाइट, इमेल र फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालको पनि भरपुर उपयोग गर्दै शैक्षिक गुणस्तरको उन्नतिमा लगाउँदै आएको छ ।
मोफसलका प्रिय डाक्टर
विमल खतिवडा, रमेशकुमार पौडेल